आमा भन्थिन् ‘कहिले पनि बाघ देखेको छैन नभन्नु । त्यसो भने बाघ रिसाउँछ । जंगलको बाटो हिड्दा सिध्याउँछ ।’
साथीभाइ कुरा गर्थे । ‘आज हाम्रो गाउँबाट बाघले कुकुर लग्यो । बाख्रा खायो । लमक्क लम्केर तानेको । कस्तो डरलाग्दो ।’
ओइ केटा तैले बाघ देखेको छस् ? साथीभाइ सोध्थे ।
‘देखेको छैनस् ?’
‘त्यत्रो गाउँमा बाघको जगजगी छ तैले बाघ देखेकै छैनस् ।’
स्कुल सकेर घर जाँदा पुरै जंगलै जंगल जानु छ । म जंगलको राजालाई देखेको छैन भन्ने वई फुच्चे आज बाख्रा कुकुर नखाएर तंलाई नै खाइ दिन्छु पो भन्ला कि ?
‘देखेको छु नि पाटेपाटे हुन्छ । नङ्ग्रा हुन्छ । हाम्रो घरको काली कुकुरनी लैजदा देखेको ।’ लौ जा जे पर्यो भन्दिएँ । ज्यान त बचाउनै पर्यो । किताबमा बंगाल टाइगर भनेर पढेको कुरालाई बढाइ चढाइ दिएँ । केटाहरु ट्वा ।
धेरै पछि काठमाडौ आइयो । घुम्ने ठाउँ धेरै । स्वयाम्भु, पशुपति, एयरपार्ट, हनुमानढोका । सबै भन्दा जान मन लागको जाउलाखेलमा सदरचिडियाखाना । जनवार धेरै छन् त्यसमा बाघ पनि छ । किताबमा पढेको । लौ बाघ हेरिने भो । जिन्दगीको एउटा डर सकिने भो । ढुक्कले बाँचिने भो । मनमा रमाइलो भो । टिकट काटेर सरसर बाघ हेर्न गइयो । अग्लो पर्खाल छ । तारबार छ । मान्छेका भिड छन् । बाघले पानी खाने पोखरी छ । सुत्ने मुढो पनि छ । तर बाघ छैन । लौ फसाद यत्रो मान्छे त बाघको दर्शनका लागि पो छन् । एक घन्टा कुरियो बाघ निक्लदैन । दुई घन्टा कुरियो बाघ निक्लदैन । मान्छे आका छन् एक छिन बसेका छन् फेरी अरु जनवार हेर्न गएका छन् । आफू बाघ नहेरी नजाने भनेर बसेको बस्यै छ । साँझै पर्न लाग्यो बाघ निक्लेन । अब फर्कनुको बिकल्प भएन ।
कोठामा दाइले फ्याट्टै सोधे ‘आइ केटा देखिस बाघ ?
‘चुप ’ ।
‘लौ यो त चिडियाखाना गएर पनि बाघै नदेखि आएछ ।’
दाइले कुरा बुझे । यो पटक पनि बचियो ।
त्यस पछि धेरै समय सहर तिरै बित्यो । पछि मात्र थाहा भो । हाम्रो गाउँमा पाटेबाघ अर्थात बङ्गाल टाइगर नहुने रैछ । हामी लेकाली भएको फाइदा । म स्कुल पढ्ने बेलामा बाख्रा, कुकुर खाने त चितुवा पो रहेछ । बाघै हेर्नको लागि नेपालकै धेरै बाघ भएको बर्दिया निकुञ्ज पनि पुगियो । जंगल घुमाउने साथीको उपनाम नै बर्दिया टाइगर । उनले अरु बेला देखिने ठाउँमा हामीलाई लगे । बाघको हिडेको पाइतालाको छाप देखियो । बाघ देखिएन । साथीले भने ‘तंपाईहरु अनलक्की ।’
फेरी अर्को मौका जुर्यो चितवन निकुञ्ज घुम्ने । नेपालको दोस्रो धेरै बाघ भएको ठाउँ । नाम त जंगल सफारी । त्यत्रो जंगलमा गाडीमा बाघ हेर्न हिडेको । के देखिन्थ्यो ? देखिएन । घुमाउने गाइडले गैडा देखाए । त्यसैमा चित्त बुझाइयो ।
केही समय भयो कोरिया आएको । रमाइलो गर्ने ठाउँ त कति छन् कति । पैसा न चाहियो । छलफल भो । निष्कर्ष निस्कियो इभरल्यान्ड जाने । रोलरकास्टर खेल्ने ।
सिटमा बसियो । हिडेको इसारा भो । तेस्रो तेस्रो ठीकैथ्यो । एक्कासी सिधै आकाश तिर चढ्यो । लौ ज्यान धरापमा छ । त्यति सोच्न पाएको थिएन । आकाशमै पुगे झै भयो । रोकिन्छ कि झै गरेर सिधै तल खस्यो । बाँच्नु यति रैछ कि क्या हो । के के न रमाइलो गरौला भनेर आको । खाइस । फेरी उस्तै आकाशमा पुगेको छ । फेरी सिधै तल बजारेको छ । होसहवास छैन । केही कुरा नै देखिन्न । पिलिक्क गर्छ । टाउकोमै ठोकिएला जस्ता काठका बाटो छन् । ठोक्कि पो हाल्यो । ठोक्किदैन । खसिपो हाल्यो । खसिदैन । अब चाही पक्का मरिन्छ भन्ने ठोकुवा गर्ने बेलामा बिस्तारै स्पिड कम भो । रोकियो । अघि माथी पुर्याउँदै फाल्दै गर्दा आफ्नो जीउ र खुट्टा आफैसँग छैन जस्तो लागेकोथ्यो । हेरेको रैछ । बस बाँचियो । जिन्दगीभरको लागि पुग्यो रोलरकोस्टर ।
‘के गर्र्ने ?’
‘केही नगर्ने ।’
त्यत्रो पैसा तिरेको कताको एउटा खेल खेलेर फर्कनु ?
हेरेको जुपेटेरिया रे । लौ छिरौ । जे त देखिन्छ ।
मान्छेको लाइन छ । एक छिन बसेर फर्किन खोजेको आफू भन्दा पछि पनि लाइन थपिए । भैगो केही न केही त कसो नदेखिएला । लाइनमा बस्दा चराका स्वर बजेको बज्यै छ । आफूत अघि घुमेको रोलरकोस्टरको धङधङी छदैछ । चराचुरुङी त कसो नदेखिएला । आधा घन्टा जति कुरे पछि टाटेपाटे बाघ जस्तै गाडी आयो ।
जालीले साँघुरो गल्लीबाट गाडी अघि बढ्यो । तारेबारको घेरामा एउटा ढोकामा खुल्यो । गाडी छिर्यो । त्यो ढोका बन्द भो । अर्को ढोकाबाट गाडी दुई मिनेट हिड्यो होला । लमक्क लमक्क लम्कदै गरेको बाघ पो छ । लौ किताबमा पढेको, फिल्म हेरेको कति जोड जबरजस्ती गर्दा पनि नदेखेको बाघ छ । अग्लो । ज्यान मिलेको । टाटेपाटे । विस्वासै लागेन ।
पाँच मिनेट गाडी गुड््यो होला । सिंह पनि देखा पर्यो । जंगलको राजा भनेको सुनेको । मान्छेको बसमा परेपछि के लाग्छ ? भालु त सानो सानो मिठाई जस्तो खानाको लागी दुई हात जोडेर नमस्कार गरे झै पो गर्छ । अगाडी गयो थरी थरीका जनवार छन् । आफ्नै तालका । जे होस आफूलाई भने नेपालमा हेर्न नपाइएको बाघ हेर्न पाइयो । पचासहजार वन खर्च भए पनि एभरल्यान्ड घुमेर पैसा फिर्ता भो । गर्मी बिदामा एक दिन घुम्नु भए हुन्छ तंपाई पनि ।
Labels: article of gocool, experience of life, gocoolthokar, tiger
ANI GHUMEKO PHOTO PANI POST GARA NA HAKI HAMI PANI HERUM